တရားဝင်အခမဲ့စာအုပ်များ download လုပ်ရန်ဆိုဒ်များစာရင်း eReaders အားလုံး
2 အကျိုးအမြတ်မယူသောဆိုက်များ ebooks ကို download လုပ်ရန်
2.3 eBooks ကူးယူရန်အခြားဆိုဒ်များ
3 အခမဲ့ ebooks ရှိသည်စီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းများ
4 နည်းပညာဆိုင်ရာ ebooks များကို download လုပ်ရန်ဆိုဒ်များ
ဒီစုဆောင်းမှုနှင့်အတူကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကိုစာရင်းကမ်းလှမ်းရန်ရည်ရွယ်ထားသည် ebooks များကိုအခမဲ့နှင့်တရားဝင် download လုပ်ရန်ဆိုဒ်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်မှာဆိုဒ်များအသစ်များထပ်ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမရှိတော့သောအရာများကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်စာရင်းကိုအခါအားလျော်စွာအဆင့်မြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ သတိရပါ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းတရား ၀ င်ပါဝင်တဲ့စီမံကိန်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။
ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်အသုံးပြုရန်အတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသည်။ ကွင်းကွင်း၌သင် ebooks ၏ဘာသာစကားများကိုသင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီတွင်တွေ့နိုင်သည်။ (ES) စပိန်ဘာသာစကား (EN) အင်္ဂလိပ်နှင့် (IS IN) စပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်လို။ ပြီးခဲ့သည့် update ကိုကတည်းကသတင်းများပေါ်လာပါသည် နောက်ခံအစိမ်း.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းရှိပါတယ် 63 ဘာသာစကားအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည့်သန်းနှင့်ချီသောစာအုပ်များနှင့်ရင်းမြစ်များ။
အကျိုးအမြတ်မယူသောဆိုက်များ ebooks ကို download လုပ်ရန်
ဒီအပိုင်းမှာအမြတ်အစွန်းမယူတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုပြမယ် ဒေါင်းလုပ်စာအုပ်များ ဂန္ထဝင်မှအက်ဆေးများအထိ၊ စာအုပ်များ၊ ကလေးများစာအုပ်များအထိဖြစ်သည်။
အလွန်များပြားသောယေဘုယျစီမံကိန်းများနှင့်အများပြည်သူပိုင်ရှိဂန္ထဝင်လုပ်ငန်းများ Gutenberg သည် .epub နှင့် Username တို့တွင် ebooks များကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထင်ရှားသည်။
Gutenberg စီမံကိန်း (IS IN) မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သောအလုပ်များကိုပေးသောစီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်သောဂန္ထဝင်များကြားတွင်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအများသုံးဒိုမိန်းစာအုပ်များ။
Archive.org (IS IN) သန်းပေါင်းများစွာသောအများပြည်သူဆိုင်ရာဒိုမိန်းစာအုပ်များစုဆောင်းထားသောနောက်တစ်ခု။ ကမ်းလှမ်းချက် pdf ။
- ပွင့်လင်းစာကြည့်တိုက် (IS IN) တည်ရှိပြီးစာအုပ်တိုင်းအတွက်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သောအင်တာနက်မော်ကွန်းတိုက်စီမံကိန်း။ စာအုပ်၏ tabs များသို့မဟုတ်စာမျက်နှာများမှဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကိုခွင့်မပြုသော်လည်း၎င်းသည် public domain တွင်ရှိလျှင် Gutenberg, Archive သို့မဟုတ်၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
စပိန်ဘာသာဖြင့် Wikisource နှင့်သင်သည်အခြားဘာသာစကားဖြင့်စာအုပ်တွေချင်တယ်ဆိုရင် ဝီကီ။ ၎င်းသည်အများသုံးဒိုမိန်းတွင်သို့မဟုတ်လိုင်စင်အောက်ရှိမူရင်းစာသားများ၏အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ GFDL သည် pdf ဖြင့် download ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသော Wikimedia project ဖြစ်သည်။
Wikibooks (ES) အခြားဝီကီမီဒီယာပရောဂျက်သည်ဖတ်စာအုပ်များ၊ လက်စွဲစာအုပ်များ၊ သင်ခန်းစာများသို့မဟုတ်အခမဲ့ပညာရေးနှင့်အခမဲ့ရယူနိုင်သောအခြားပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းများကိုမည်သူမဆိုရရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
iBiblio (EN) ကြီးမားတဲ့စာကြည့်တိုက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် archive ကို။
ဟစ်စပန်းနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုက် (ES) အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏ဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်များ၏အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ပေါ်တယ်။
Miguel de Cervantes ၏စာကြည့်တိုက် (ES) ၎င်းသည်ဟစ်စပန်းနစ်ဘာသာစကားများဖြင့်ရေးသားထားသောဂန္ထဝင်လက်ရာများဖြစ်သည်။
Seville ၏စာကြည့်တိုက်များ၏မြူနီစီပယ်ကွန်ယက်ကို (ES) Seville ၏စည်ပင်သာယာစာကြည့်တိုက်ကွန်ယက်၏ဒစ်ဂျစ်တယ် catalog ။
Europeana (IS IN) ၎င်းသည်ဥရောပရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောဒစ်ဂျစ်တယ်အရင်းအမြစ်များကိုရယူရန်ဖြစ်သည်။
Adelaide တက္ကသိုလ် (EN) သြစတြေးလျရှိ Adelaide တက္ကသိုလ်၏အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်သည် online ကိုဖတ်ရန်သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများဖြင့်အလုပ်များကို download လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ငန်းနှင့်ရေဘဝဲ (ES) ၎င်း၏ထုတ်ဝေမှုများအတွက်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးနှင့်အတူအမြတ်အစွန်း non- အမြတ်အစွန်းတစ်ခု။ Ganso y Pulpo သည်လွတ်လပ်သောအကျိုးအမြတ်မယူသည့်ထုတ်ဝေမှုစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရယူရန်ခက်ခဲသော (သို့) မေ့ပျောက်သွားပြီး၎င်းသည်အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်သောစာသားကိုပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။
Algernon များအတွက်ပုံပြင်များ (ES) သိပ္ပံဝတ္ထုများ၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာပုံပြင်များကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသည့်ထူးကဲသောပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမခံရဖူးတဲ့ထိပ်တန်းစာရေးဆရာတွေရဲ့ပုံပြင်တွေကိုသယ်ဆောင်ပေးတဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအမြတ်နောက်တစ်ခု Ignotus 2013 ၏အောင်မြင်သူ၊ အကယ်၍ သင်သိပ္ပံဝတ္ထုကိုကြိုက်လျှင်၎င်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
Cruciform Editions (ES) ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Ignotus ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သောလွတ်လပ်သောအကျိုးအမြတ်မယူသောထုတ်ဝေသည့်အိမ်ငယ်လေးသည်အခြားသူများနှင့်အတူအခမဲ့စာအုပ်များကိုပေးသည်။ ပြီးဆုံးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်အများပြည်သူပိုင်ဖြစ်လာသည်။
Book Camping လုပ်ပါ (ES) ၎င်းတို့ကိုပူးပေါင်းဒစ်ဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းများကိုပွင့်လင်းလိုင်စင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရည်စူးကြသည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များနှင့်များစွာချိတ်ဆက်ထားသည်။
ကွန်မွန် (IS IN) လမ်းညွှန်နှင့်အခမဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြန့်ဖြူးပလက်ဖောင်း။
1 စာအုပ် 1 € (ES) စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးတွင်အခမဲ့စာအုပ်များမပါ ၀ င်သောတစ်ခုတည်းသောစီမံကိန်းသည်၊ Save the Children သို့လှူဒါန်းမှုတစ်ခုအတွက်သင်ကလေးများအားကူညီရန်သင်စာအုပ်တစ်အုပ်လျှင်ယူရို ၁ ဒေါ်လာပေးဆောင်ရန်အကြံပြုသော်လည်းသင်လိုချင်သောစာအုပ်များအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
ဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်များ (ES / EN / FR) Ignacio FernándezGalvánမှလုပ်သောအလုပ်များ။
ဤအပိုင်းတွင်သီးခြားအကြောင်းအရာများအတွက် ebooks များကိုပေးသောအရင်းအမြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
မြို့တော်အနုပညာပြတိုက် (EN) နယူးယောက်ရှိ Metropolitan အနုပညာပြတိုက်သည်အနုပညာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ PDF format ဖြင့်စာပေများစွာကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ပြပြတိုက် (EN) အများသုံးဒိုမိန်းရုပ်ပြ ၁၅၀၀၀ ကျော်နှင့်ရွှေတံဆိပ်ရှိဂန္ထဝင်ရုပ်ပြစာအုပ်များကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာအွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် (ES) ၎င်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာနယ်ပယ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပါမောက္ခဒီယေဂိုအက်ဖ်ခရက် (ဂ်) မှပြုလုပ်သော PDF ဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များနှင့်မဂ္ဂဇင်းများကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
Boe - ဥပဒေပြုရေး (ES) တရား ၀ င်စနစ်အတွင်းရှိအဓိကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ် update လုပ်ပြီး pfd နှင့် epub ပုံစံများဖြင့်အမြဲတမ်း update လုပ်သည်။ သူတို့ကဥပဒေ၏အကိုင်းအခက်များကတင်ပြကြသည်။
အခမဲ့ ebooks ရှိသည်စီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းများ
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အခမဲ့စာအုပ်အချို့ကမ်းလှမ်းသောစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်သည့်စီမံကိန်းများ။ ဤနေရာတွင် Amazon, Google သို့မဟုတ်စာအုပ်အိမ်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးများ၊ အခမဲ့ ebooks များနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် Gutenberg ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအပေါ်အခြေခံသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။
Amazon Kindle (IS IN) အဆိုပါ ebook ကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘာသာစကားအားလုံးအတွက်အခမဲ့ ebooks အမြောက်အများကိုပေးထားသည်။
- အမေဇုံရှိ Public Domain (IS IN) Public Domain တွင်လိုင်စင်ရ Amazon စာအုပ်များကိုရှာပါ။
- အခမဲ့စာအုပ် Sifter (IS IN) Amazon စာအုပ်များကို အခြေခံ၍ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle အတွက်အခမဲ့ ebooks များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေရန်လွယ်ကူစေရန်၊ စပိန်ဘာသာဖြင့်စာအုပ်များရှိသည်။
- သုညရာပေါင်း (ES) အမေဇုံကိုအခြေခံပြီးနောက်ထပ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုစပိန်လိုစာအုပ်တွေပြတယ်။
- နင် (EN) ဤစီမံကိန်းသည် Amazon, Barnes နှင့် Nobles နှင့် Kobo တို့မှအခမဲ့စာအုပ်များကိုကမ်းလှမ်းပြီး၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားဘလော့ဂ်ပုံစံဖြင့်တင်ပြသည်။
စာအုပ်၏အိမ် (IS IN) စပိန်နိုင်ငံရှိစာအုပ်ဆိုင်ကြီးများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ကျယ်ပြန့်သောစီးပွားဖြစ်ကတ်တလောက်သည်အခမဲ့သို့မဟုတ်လုံးဝတန်ဖိုးမရှိသောအလုပ်များဖြစ်သည်။
Google ကစာအုပ်များ (IS IN) ၎င်းသည်စာအုပ်အညွှန်းတစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီးအွန်လိုင်းတွင်ဖတ်နိုင်သောစာအုပ်အမြောက်အမြားကိုရှာဖွေနိုင်သော်လည်းဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မရပါ။
Play Store ကို (IS IN) ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှဖတ်ရန်အခမဲ့စာအုပ်များရှာနိုင်သောဂူဂဲလ်အွန်လိုင်းစတိုး။
Public domain (ES) အများပြည်သူပိုင်ဖြစ်လာသည့်လုပ်ငန်းများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပြုစုခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည့်လမ်းညွှန်နှင့်ဆင်တူသည့်စီမံကိန်း။
liရာဝတီ (ES) အခမဲ့ ebooks များကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ သင်၏မျှတသောအရာဟုထင်မြင်ယူဆသည့်အရာများကိုဖတ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ငွေပေးချေရန်ခွင့်ပြုသည့် Initiative သည်၊ ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်
Virtual Book (ES) အများသုံးဒိုမိန်းတွင်အကျင့်များရှိသောဂန္ထဝင်စာရေးဆရာများသည်စာရေးသူအသစ်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဖြန့်ဝေရန်အတွက်၎င်းတို့၏လက်ရာများကိုတင်သည်။
BQ စာရှုသူများ (ES) BQ ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ၎င်း၏ ereaders ၏စာအုပ်များတင်သောအတူဂန္ရွေးချယ်ရေး။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို zip ဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူတယ်။
စာကြည့်တိုက် (IS IN) ebooks အမြောက်အများကိုကမ်းလှမ်းသော Portal ကို။
Feedbooks (ES) ကျွန်တော်တို့ကိုအများဆိုင်ဒိုမိန်းအတွက်အလုပ်များရွေးချယ်မှုပေးထားပါတယ်သောအီလက်ထရောနစ်စာကြည့်တိုက်။
Manybooks (EN) Gutenbeberg နှင့် Genome စီမံကိန်းတို့အပေါ်အခြေခံထားသည့်စီမံကိန်းတွင်အော်ဒီယိုစာအုပ်များရှိသည်။
eBooksgo (EN) Gutenberg-based စာအုပ်လမ်းညွှန်။
Planet စာအုပ်(ES) အများပြည်သူဒိုမိန်းစာအုပ်တွေပေးထားပါတယ်။
ပွင့်လင်းယဉ်ကျေးမှုအခမဲ့ ebooks (EN) ကိရိယာအမျိုးမျိုး၊ ereaders, iphds, iphdss, smartphone များစသည်တို့အတွက်စာအုပ် ၇၀၀ ကျော်ဖြင့်စာရင်းပြုစုပါ။
Dyskolo ထုတ်ဝေမှုများ (ES) အယ်ဒီတာ့အာဘော်က၎င်းထုတ်ဝေသောအရာအားလုံးသည် Creative Commons လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိသည်
bubok (ES) ကောင်းမွန်သော desktop ထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်းတွင်အခမဲ့စာအုပ်များစွာရှိသည်။
24 သင်္ကေတ (ES) ၎င်းသည်အွန်လိုင်းစာဖတ်ခြင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အွန်လိုင်းပေါ်တွင်စာအုပ်များဖတ်ရန်နှုန်းထားတစ်မျိုးဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အခမဲ့ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမတူညီသော volumes များထားရှိသည်။
Kobo (EN) oboရာမ Kobo တွင် Amazon ကဲ့သို့သောကက်တလောက်များတွင်အခမဲ့စာအုပ်များရှိသည်။
Barnes & Noble (EN / ES) Kobo နှင့် Amazon တို့နှင့် ပတ်သက်၍ တတိယမြောက်ငြင်းခုံမှုတွင် download လုပ်ရန်အခမဲ့ volumes များရှိသည်။
Smashwords (EN / ES) အခမဲ့စာအုပ်များနှင့်အတူ Indie စာအုပ်ဖြန့်ချိသူ။
Ebook ကုန်တိုက် (EN) ereaders၊ iphone၊ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ipads၊ pc နှင့် mac တို့အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် ebooks
အားကစား (ES) သူ၏လက်ရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောအမျိုးအစားထုတ်ဝေသူ
လက်တူး (ES) ကြီးမားသောစပိန်ယဉ်ကျေးမှုပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ebooks, audiobooks နှင့် podcasts များကိုအခမဲ့ပေးမည်၊ လူမှုရေးငွေပေးချေမှုမှတဆင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
စာအုပ် (ES) စာအုပ် ၁၀,၀၀၀ ကျော်ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အင်တာနက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။
အိပ်မက်ဆိုး (ES) ဤစာစီစာကုံးကိုအဓိကထားသောထုတ်ဝေသူသည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစက္ကူစာအုပ်များရောင်းချခြင်းကိုအာရုံစိုက်သော်လည်း Creative Commons လိုင်စင်အောက်တွင်အလုပ်များစွာကိုချန်ထားသည်။ CC က BY-NC , CC ကို BY-NC-SA , CC ကို -NC-ND )
ငါ့ဖုန်းပေါ်ရှိစာအုပ်များ (EN) ၎င်းတို့ကို Java install လုပ်ထားသည့်မည်သည့်ဖုန်းနှင့်မည်သည့်စက်တွင်မဆိုဖတ်နိုင်စေရန် Ebooks ကိုပြင်ဆင်ထားသည်
Junkie ebook (EN) အသစ်နှင့်လွတ်လပ်သောစာရေးဆရာများများအတွက်ပလက်ဖောင်း
စာပေ (EN) လွတ်လပ်သောစာရေးဆရာများ၏နောက်ထပ်ထုတ်ဝေသူ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ebooks များကို download လုပ်ရန်ဆိုဒ်များ
ပွင့်လင်း Libra (IS IN) နည်းပညာဆိုင်ရာ ebook များ၏အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်။ နည်းပညာနှင့်အခမဲ့စာအုပ်များအမြောက်အမြားကိုပြုစုပြီးကမ်းလှမ်းသောအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစီမံကိန်းတစ်ခုမှာသံသယမရှိဘဲနှင့်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Microsofot နည်းပညာ (EN) Microsofot သည်အခမဲ့နည်းပညာနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်စာအုပ်များကို pdf format ဖြင့် download ပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းတွင်ဖတ်ရန်အတွက်ချန်ထားခဲ့သည်။
နာဆာ ebooks (EN) NASA နည်းပညာလေကြောင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဆိုင်ရာစာအုပ်များ။ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
CSIC စာအုပ်များ (ES) သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ကောင်စီမှထုတ်ဝေသောအခမဲ့စာပေအမြောက်အမြား။ ဒါဟာသိပ္ပံပညာ၏အကိုင်းအခက်ကိုထိ။
Tech မှ (EN) Open Access နှင့်အလုပ်လုပ်သောအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနည်းပညာနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများစာရင်း။
အခမဲ့ Tech စာအုပ်များ (EN) အခမဲ့နှင့်မူပိုင်ခွင့်ကင်းမဲ့သည့်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းစာအုပ်များ။
O'Really OpenBooks (EN) O'Really ပုံနှိပ်တိုက်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ Open Books ထားပေးတယ်။ ၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ မရပါ၊ သို့သော်သင်အွန်လိုင်းဖတ်နိုင်သည်၊ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရင်းအမြစ်များ။
အခမဲ့ပရိုဂရမ်မာစာအုပ်များ (EN) ငါတွေ့ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးစာရင်းကတော့ထိပ်တန်းရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာစုစည်းထားသော Github မှတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးပေါ်စာရင်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလင့်ခ်နဲ့အတူကျန်တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုတွေကတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူး။ Github အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းရှာနိုင်သည် ရေတံခွန် တစ် ဦး ထက်ပိုဖော်ရွေကို web format နဲ့
အွန်လိုင်းပရိုဂရမ်းမင်းစာအုပ်များ (EN) ပရိုဂရမ်းမင်း၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၊ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ၊ ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်ပ်တီထွင်မှု၊ ဒေတာဘေ့စ်များ၊
အခုအချိန်မှာ ငါတို့မထည့်ဘူး အခမဲ့စာအုပ်များကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်း၎င်းကိုအလွယ်တကူစီစစ်ရန်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ခွင့်မပြုသောကြေညာသူများ၊ သို့သော်လူများစွာသည်စိတ် ၀ င်စားသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုစာရင်းထဲသို့မည်သို့ထည့်ရမည်ကိုစဉ်းစားနေကြသည်။
သင်မပါ ၀ င်သောအခမဲ့နှင့်တရားဝင်အကြောင်းအရာပါ ၀ င်သောဆိုဒ်များအကြောင်းသင်သိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ ငါတို့စာရင်းထဲသို့သူတို့ကိုငါသွင်းပါလိမ့်မယ် အွန်လိုင်းအခမဲ့ ebooks ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်စာမျက်နှာများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » eBooks » တရားဝင်အခမဲ့စာအုပ်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဆိုဒ်များစာရင်း
ဘောရစ် ဒါဆေးလ်ဗာ ပီရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာသင့်ကိုနေ့စဉ်နောက်လိုက်ပါမယ်။ အလုပ်ကောင်းတယ်။
Boris Da Silva Pérezအားပြန်ကြားခြင်း
Perez San Juan NIEVES ဟုသူကပြောသည်
NIEVES PEREZ SAN JUAN သို့စာပြန်ပါ
ငါအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည် eboks အားရှာဖွေခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းများကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါအန်ဒီလ်လား။ သင်နဂိုအတိုင်းအသစ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သောဖိုရမ်တစ်ခု၏သီးသန့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသတိပေးသည့်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ https://www.todoereaders.com/foros/showthread.php?t=794
ကျွန်ုပ်တွင်စာအုပ်တင်ထားသောဘလော့ဂ် (အခွင့်အရေးအားလုံးဖြန့်ချိ) သည်၊ သင်ထုတ်ဝေသူများထက်နှိမ့်ချမှုရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်မျှဝေသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်လည်ပတ်လိုပါက Epub နှင့် PDF ကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ။ အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါမင်းရဲ့ပရောဂျက်ကိုငါပြန်လည်သုံးသပ်မှာပါ။ နောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာငါလုပ်မယ့်စာရင်းရဲ့နောက်မွမ်းမံချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လိုက်လျောမယ်ဆိုရင်ငါထပ်ထည့်ပါမယ်။
Nacho၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ပါကလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ။
Bookပြီ ၂၃ ရက်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာအုပ်နေ့နှင့်စာရေးသူ၏အခွင့်အရေးတို့အထိမ်းအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအထူးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။
Amazon မှာအခမဲ့စာအုပ်တွေဘယ်အချိန်ရောက်မလဲဆိုတာဒီ link မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းငါ bq cervantes အီးစာအုပ်ဝယ်ယူလိုက်သော်လည်းစာအုပ်အားလုံးနီးပါးသည်မီးတောက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ငါသူတို့ကို bq တွင်ဒေါင်းလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
သူငယ်ချင်းဖြစ်ရင်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်စာအုပ်တွေကိုထဲ့ပေးရလေ့ရှိတယ်။ သင်လိုချင်ရင်ဒီစာမျက်နှာကိုသွားပြီးခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၃၀ ဝဝဝကျော်အပြင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ http://www.megaepub.com/
မင်္ဂလာပါ။ epub ကိုဤစာမျက်နှာမှအခမဲ့ download လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ [စာမျက်နှာများတွင်စာအုပ်အားလုံးရှိသည်။
မင်္ဂလာပါ Milagros ။ တရား ၀ င်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်ဆိုဒ်များအကြောင်းသာပြောပါမည်
နေကောင်းလား? epubs များကိုသင် upload လုပ်နိုင်သောမည်သည့် platform ကိုမဆိုသင်သိပြီး၎င်းကို virtual shelf တစ်ခုအဖြစ်ပြသပါသလား။ တနည်းပြောရရင်တိမ်တိုက်ထဲမှာမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်တွေရဲ့ virtual စင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
ဟိုင်ဒါရီ၊ အခုတစ်ခုခုတော့ကျွန်တော်သေချာပေါက်ရှိပေမယ့်အခုမှမသိသေးဘူး။ ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့သင်၏စာကြည့်တိုက်ကို Caliber manager နှင့် dropbox, copy, drive သို့မဟုတ်အလားတူပေါ်တွင် install လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းမှာစာအုပ်တွေအမြဲရှိတယ်။
Nacho, အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာကသူတို့ကို Cloud မှာသိမ်းထားရုံသာမကတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဖုံးနဲ့နာမည်တွေကိုကြည့်နိုင်ဖို့၊ သူတို့ကိုရွေးနိုင်ဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏တက်ဘလက်မှတိမ်တိုက်ထဲသို့ ၀ င်ပါကအဖုံးများမဟုတ်ဘဲဖိုင်များ၏အမည်များကိုသာတွေ့လိမ့်မည်။ လိုအပ်ရင် download လုပ်ပါ။ တစ်ခုခုတွေ့ရင်ငါ့ကိုအသိပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် JM Mediola မှထုတ်ဝေသော The English Cemetery စာအုပ်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းပြောပြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟယ်လို။ Ablik နဲ့တွေ့ဖို့သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ( http://ablik.com) ။ Ebooks များကိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ သို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ဖတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောမူလစာပေ၏မူလစာပေများဖြစ်ပြီးလုံးဝတရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစထုတ်ဝေနိုင်ပါသည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!
laviniacor ဆေး ဟုသူကပြောသည်
Geez၊ ငါအသက်ကြီးလာပြီ၊ ငါဟာအရာရာတိုင်းကိုအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကနေတဖြည်းဖြည်း "ကျွမ်းကျင်သူ" တစ် ဦး ဖြစ်လာတယ်။ "ကျွမ်းကျင်သူ" တစ်ယောက်ပါ။ နှင့် todoreaders.com »တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောဆောင်းပါးများ! ကျေးဇူးတင်ပါသည် !
လူစီယာ Garcia ဟုသူကပြောသည်
Nacho! အလွန်မြတ်သောစုစည်း အသံစာအုပ်များနားထောင်ရန် Amazon နှင့် Audible မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်အကြံပြုသနည်း။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ၀ င်ငွေသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္financeာရေးဆိုင်ရာ Kindle စာအုပ်များကိုလက်ခံရန်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်သင့်ကိုကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်ပါသည်။
ငါမက်ဒရစ်မှာ BQ Cervantes3ဝယ်ပြီ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အာဂျင်တီးနားတွင်နေထိုင်ပြီးစတိုး (သို့) ကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်ရှိအခြားမည်သည့်စာအုပ်များမှစာအုပ်များကိုမ ၀ ယ်နိုင်သည့်အတွက်အံ့အားသင့်မိသည်။ NUBICO စနစ်သည်ဥပမာအားဖြင့်အာဂျင်တီးနားအကြွေးဝယ်ကဒ်များကိုအခြားနိုင်ငံများနှင့်မကြုံတွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည် ငါဝယ်သောကမ္ဘာ၌။
ကျွန်ုပ်သည် ၀ ယ်ရန်အခြားသောလမ်းရှိသလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ငွေဖြုန်းခြင်းလား။
ငါမကြာသေးမီကမက်ဒရစ်သို့ခရီးစဉ်မှာ BA Cervantes3ဝယ်လိုက်တယ်
နူဘီကိုစတိုးကငါ့တိုင်းပြည်ကခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ငါစာအုပ်ဝယ်လို့မရဘူး။ ထိုအခါငါက, အခမဲ့ဝယ်ယူရန်မဟုတ်ဘဲဝယ်ဖို့အကြောင်းပြောနေတာ။
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှကျွန်ုပ်ဝယ်ယူနိုင်သောမည်သည့် ebook စာအုပ်ကိုမည်သည့်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ရောင်းချပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်မည်နည်း။
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာည သင် 10″ စာဖတ်သူကိုအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ငါ pdf ပုံစံဖြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစာအုပ်များဖတ်ရန်ဤပုံစံကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အခြားဖတ်ရှုသူ (Papyre နှင့် Bq Cervantes) နှစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းတွင် pdf များကိုဖတ်ရန်လမ်းမရှိချေ။ 12″ စာဖတ်သူကိုအဘယ်အချိန်တွင်လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်မည်နည်း။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
ငါ Ebrolis စီမံကိန်းကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်၊ http://www.ebrolis.com
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်၏ Unic သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအထူးကင်ဆာပညာနှင့်သွားနှင့်ဆိုင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များ၊ ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်မသင့်သောစာအုပ်များကိုချက်ချင်းဒေါင်းလုပ်ရယူရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ နေရာတော်တော်များများမှာငါ့ကိုဒီစာမျက်နှာကိုပို့ပေးတဲ့အဲဒီစာမျက်နှာကနေအကြံပေးချင်ပါတယ်။
လူးဝစ် Diego မှ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ဒီစာအုပ်များကိုစာအုပ်များကူးယူဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့အားအလွန်ကောင်းမွန်သော ebooks များရှိသည့် bookspdfgratismundo.xyz မှကူးယူရန်အကြံပြုပါသည်။
Luis Diego သို့ပြန်ပြောပါ
အမေဇုံကမင်းရဲ့ eReader ဟောင်းကိုဝယ်လိုက်ပြီ
BookBook, iPad Air အတွက်စာအုပ်တစ်အုပ်